လူသားများနှင့် Preclinical မော်ဒယ်များအတွက်မသင်မနေရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2018) - သင့်ရဲ့ ဦး နှောက် Porn တွင်
Curr လိင်ကျန်းမာရေးကိုယ်စားလှယ် (2018) ။
Preclinical နှင့် Psychophysiology (F ကို Guarraci နဲ့ L Marson, ပုဒ်မအယ်ဒီတာများ)
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB) ကျယ်ပြန့် ", အမူအကျင့်စွဲ" ဟုအဖြစ်မှတ်ခြင်းနှင့်အသက်တာ၏အရည်အသွေးနှင့်နှစ်ဦးစလုံးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုအဓိကခြိမ်းခြောက်မှုပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် CSB တစ် diagnosable ရောဂါအဖြစ်ဆေးခန်းအသိအမှတ်ပြုခံရဖို့နှောင့်နှေးခဲ့သညျ။ CSB အကျိုးသက်ရောက်စေပုံမမှန်အဖြစ်ဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူပူးတွဲနေကြလို့ပဲဖြစ်တယ်, မကြာသေးမီ neuroimaging လေ့လာမှုများစိတ်ခွန်အားနိုး salience နှင့် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုထိန်းချုပ်ရန်အထူးသဖြင့်ဦးနှောက်ဒေသများအတွက်က Shared သို့မဟုတ်ထပ်အာရုံကြောရောဂါဗေဒမမှန်သရုပ်ပြပါပြီ။
လက်တွေ့ neuroimaging လေ့လာမှုများ prefrontal cortex, amygdala, striatum နှင့် CSB ခံစားနေရပြီးတစ်ဦးချင်းစီအတွက် thalamus အတွက်အခြေခံအဆောက်အဦးနှင့် / သို့မဟုတ် function ကိုအပြောင်းအလဲများကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်လျက်ရှိသည်။ အထီးကြွက်များတွင် CSB များ၏အာရုံကြောကျောထောက်နောက်ခံပြုလေ့လာဖို့တစ်ဦးက preclinical မော်ဒယ်လူသိများအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရှာဆန်းစစ်ဖို့အေးစက်ခြင်းကိုမနှစ်သက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပါဝင်သည်ဟုဆွေးနွေးထားတယ်။ ဒီ preclinical မော်ဒယ်အသုံးပြုခြင်းသည် medial prefrontal cortex ၏အခန်းကဏ္ဍ CSB ၏ comorbidity နှင့် psychostimulant အလွဲသုံးစားမှုစဉ်အတွင်းအာရုံကြော plasticity အပါအဝင်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
ဤသုံးသပ်ချက်ကို CSB ၏အခြေခံ neurobiology လေ့လာရန်အသုံးပြုနိုင် preclinical မော်ဒယ်များအပြင်, မကြာသေးခင်ကလူ့အပြုအမူဆိုင်ရာနှင့် neuroimaging လေ့လာမှုများအကျဉ်းချုပ်။
သော့ချက်စာလုံးများ - အတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၊ လိင်ကွဲပြားမှု၊ စွဲလမ်းမှု၊ prefrontal cortex၊ Limbic system, Sexual behavior
အခြားအ compulsive မမှန်, အမည်ရ, မူးယစ်ဆေးစွဲနှင့်အတူ CSB ရှယ်ယာဝိသေသလက္ခဏာများသောကြောင့်, CSB အတွက်တွေ့ရှိချက်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲဘာသာရပ်များ၏နှိုင်းယှဉ်ဤရောဂါ၏ comorbidity ဖြန်ဖြေဘုံအာရုံကြောရောဂါဗေဒကိုသိရှိနိုင်ဖို့အဖိုးတန်ပေမည်။ အမှန်စင်စစ်, များစွာသောလေ့လာမှုတွေ CSB နှင့်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေး [87-89] ကိုအသုံးပြုဖို့နှစ်ဦးစလုံးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟု limbic အဆောက်အဦများအတွင်းအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်သွယ်မှုအလားတူပုံစံများကိုပြသခဲ့ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကင်း-စွဲလူနာအတွက်ထပ်ကဦးနှောက်ဒေသများအတွက် ventral tegmental ဧရိယာ, amygdala, နျူကလိယ accumbens, orbitofrontal cortex နှင့်နောက်ကျနေခဲ့သည် cortex  အပါအဝင်, ကိုကင်းနှင့်လိင်တွေကိုနှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့် activated နေကြသည်။ Moeller နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကမကြာသေးမီ fMRI လေ့လာမှုမှာ, ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းရောဂါနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီသော, ပို. မကြာခဏကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုထက် dorsal anterior cingulate cortex နဲ့ ventral tegmental ဧရိယာ၌အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု  ဆက်နွယ်နေကြောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုကင်း-ဆက်စပ်ပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုရန်ရှေးခယျြခဲ့ ဒေသများတသမတ်တည်းခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှု  တို့က activated ခံရဖို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကဒီလေ့လာမှုလည်းဖြစ်နိုင်သည်လှုပ်ရှားမှုပြအနေနဲ့ဆန္ဒရှိတုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောကင်း-related ပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုဘို့အနိမ့်ရွေးချယ်မှု, ဆက်နွယ်နေကြောင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ  ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် activated ခံရဖို့ပြသထားပြီးဖြစ်သောနှစ်ဦးနှစ်ဖက် orbitofrontal cortex အတွက်ကြောင့် သာ. ကွီးမွတျလှုပျရှားမှုကိုတွေ့  ။
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ဒီသုံးသပ်ချက်အမူအကျင့်များနှင့် neuroimaging လူ့ CSB အပေါ်လေ့လာမှုများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုအပါအဝင်အခြားရောဂါများနှင့်အတူ comorbidity အကျဉ်းချုံး။ အတူတကွဤလေ့လာမှုများ CSB အပြင် amygdala နှင့် prefrontal cortex အကြားဆက်သွယ်မှုလျော့နည်းသွားရန်, dorsal anterior cingulate နှင့် prefrontal cortex, amygdala, striatum နှင့် thalamus အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ပွောငျးလဲနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ထိုမှတပါး, အထီးကြွက်များတွင် CSB များအတွက် preclinical မော်ဒယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ကြောင်း mPFC နှင့် OFC အတွက်အာရုံကြောကိုပြောင်းလဲသစ်သက်သေအထောက်အထားများအပါအဝင်ဖော်ပြထားခဲ့သည်။ ဤသည် preclinical မော်ဒယ်ကအခြားရောဂါများနှင့်အတူဓာတ်နှင့် CSB နှင့် comorbidity ၏နောက်ခံအကြောင်းတရားများကိုသိရှိနိုင်ဖို့အဓိကသော့ချက်ယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်း